Shina · Septambra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Shina · Septambra, 2011
Tantara mikasika ny Shina tamin'ny Septambra, 2011
Amerika Latina 24 Septambra 2011
Shina : Miaraka Fiverenan'ny Fahalinan'i Amerika
Amerika Avaratra 24 Septambra 2011
Tsy ny olon-drehetra no nàka iny faran'ny herinandro – fialantsasatra any Shina – ho toy ny fotoana iray ahafahana mamoaka fihetseham-pon’ny henatra tamin’izay nambarany mikasika ny fanafihana tany Etazonia efa ho folo taona lasa izay, kanefa betsaka no nanao izany. I Yang Hengjun, mpanoratra, izay nanoratra momba an'i New York sy ny USA (Etazonia) tao anaty tantara nosoratany dia nizara zavatra mitovy amin'izay koa.
Sina : Ireo Fandaniam-bolam-bahoaka Telo Sy Ny Tsiambaratelom-panjakana
Fifandraisana iraisam-pirenena 18 Septambra 2011
Ny teny hoe "ireo fandaniam-bahoaka telo" na san gong jingfei, dia miainga avy amin'ireo fandanian'ny governemanta noho ny fivoahana mankany ivelany, sakafo sy fialamboly ary ny fiaram-panjakàna. Ireo fandaniana telo ireo no noheverin'ny vahoaka manontolo ho toy ny tena fototry ny kolikoly ho an'ireo mpikambana ao amin'ny governemanta
Shina: “Sakafo maimai-poana” ho an'ny Mpianatra Ambanivohitra avy amin'ny Fanampiana madinidinika
Fanabeazana 06 Septambra 2011
Nanakorontana lalina ny fanabeazana Shinoa ny elanelam-pihariana misy eo amin’ny tontolo andrenivohitra sy ny tontolo ambanivohitra. Miantraika amin’ny mpianatra any ambanivohitr’i Shina ny olana ara-drafitra tahaka ny fampianarana, fandraharahana, fotodrafitr’asa ary ny kojakojam-pampianarana noho ny tsy fahampiam-bola. Any amin’ny faritra tena mahantra, na dia ny famahanana ny kilonga mba hananany...